दुई दिनमा दुवै छोरा गुमाए बुटवलका ‘माइला बा’ले
दुई दिनमा दुवै छोरा गुमाए बुटवलका ‘माइला बा’ले ‘सल्लाह गरेर एकैपटक गयौं बाबु दुई भाइसँगै बस्नु है,’ ‘माईला बा’ आइतबार साँझ बुटवलको मगरघाट यही वाक्य दोहोर्‍याउँदै बर्बराइरहेका थिए। सधैंभरी आफ्नो प्रस्तुतिबाट अरुलाई हँसाउने ‘माइला बा’का आँखामा आँशु थामिएको थिएन। लामो समयदेखि ‘माइला बा’ नामले परिचित विष्णु जी पाण्डे र उनकी श्रीमती शोभा पछिल्लो तीन दिन
डा. केसीले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे- तेह्रथुमका मानिस उपचार गर्न कहाँ जान्छन्?
डा. केसीले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे- तेह्रथुमका मानिस उपचार गर्न कहाँ जान्छन्? प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा शनिबार भेटवार्ता गर्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। साथमा केसी वार्ता संयोजक अभिशेक राज सिंह। तस्बिरः निशा भण्डारी वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको टोली र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच शनिबार दुई घन्टा संवाद चल्यो। संवादको
विप्लवका प्रवक्तालाई ४८ घन्टाभित्र सर्वोच्चमा उपस्थित गराउन आदेश २८ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) लाई ४८ घन्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ । आइतबार दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाई गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको हो । सर्वोच्चले बाटोको म्यादबाहेक ४८ घन्टाभित्र
अर्थमन्त्रीको ६ महिना : उपलब्धिभन्दा आक्रोश बढी
काठमाडौं– २५ साउनमा प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलका क्रममा प्रदेश नम्बर ५ का सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राजीनामा नै माग गरे । अर्थमन्त्रीले जनताको माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै दाङबाट निर्वाचित सांसद मेटमणि चौधरीले खुलेरै उनको राजीनामा मागेका थिए । पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीका उपलब्धिभन्दा बढी कमजोरीका बारेमा चर्चा हुने गरेको छ । आफ्नै पार्टीभित्र
२८ साउन, काठमाडौं । सिंहदरबारभित्रै एक जना उपसचिव कुटिएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव ऋषि आचार्य कुटिएका हुन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आइतबार दिउँसो निजामती कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष जीवन भण्डारीले उनीमाथि मुक्का प्रहार गरेका थिए । भण्डारीले सिफारिस अनुरुप एक कर्मचारीको सरुवा नगरिए पछि उनले कुटपिट गरेको स्रोतको भनाइ छ ।